Abenzi beebhasikithi zabavelisi kunye nababoneleli - China iingcingo zebhaskithi zeshishini
Iimveliso zethu zithengiswa phantsi kweempawu ezintathu ezinesidima: YANGLI, GERISS, HIFEEL. Ziyinkqubo yedrowa, iZilayidi ezifihliweyo, iZilayidi zokuthwala ibhola, iZilayidi zeTafile, iihenjisi ezifihliweyo, izibambo, iihenjisi ze-oveni kunye nezinye izinto zefanitshala zefanitshala, ezisetyenziswa kwifenitshala, iikhabhathi, izixhobo zasekhaya njl.
Steel shaf isikwere shaf ...
I-oveni yegesi yokupheka ...
Iklip-kwiKhabhinethi ihinji conce ...
86mm ubude edreyini pan ...
150mm ubude idrowa isilayidi s ...
I-303 Series clip-on emxinwa ikhuphe i-sliding yocingo ye-basket
Intshayelelo: I-303 Series clip-on emxinwa ikhuphe i-sliding yocingo ye-basket. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 303
310 Series icala entabeni cwaka ethambileyo yokuvala intsimbi sliding ngocingo idrowa
Intshayelelo:I-310 yecala elisecaleni lentaba ethe cwaka yokuvala intsimbi ethambileyo yokutyibilika kweewotshi zebhasikidi. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
312 Series elliptical tyaba chrome emxinwa chrome ngaphandle ibhaskiti kwidrowa kwikhitshi nekhitshi
Intshayelelo:312 Series elliptical tyaba chrome emxinwa chrome wakhupha ucingo ibhaskiti idrowa kwikhitshi nekhabhathi. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 312
Amacandelo angama-321 amacala aphakamileyo akhupha i-drawer ye-basket ye-basket ye-basket yeekhabhinethi
Intshayelelo:Amacandelo angama-321 amacala aphakamileyo akhupha i-drawer ye-basket ye-basket ye-basket yeekhabhinethi. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 321
I-322 Series enkulu kunye encinci encinci yecala lokucoca isinyithi sedreyini yocingo
Intshayelelo: I-322 Series enkulu kunye encinci encinci yecala lokucoca isinyithi sedrowa yebhasikiti yedrowa yeekhabhathi zasekhitshini. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 322
I-325 Series enkulu kunye namacala amabini amacala endawo yentaba ethe tyaba yentsimbi
Intshayelelo: I-325 Series enkulu kunye namacala amabini amacala endawo yentaba ethe tyaba yentsimbi yibhasikidi yedrowa yeekhabhathi zasekhitshini. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 325
I-331 Series ezimbini zecala lokucoca intaba yesinyithi esityibilikayo yocingo ikhuphe idrowa
Intshayelelo: I-331 Series ezimbini zecala lokucoca isinyithi esityibilikayo ucingo lwebhasikithi yakhupha idrowa yeekhabhathi zasekhitshini. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 331
I-332 Series ikhabinethi yecala ekhwele intambo yocingo ikhuphe idrowa
Intshayelelo: I-332 Series ikhabini esekhitshini ecaleni kwentaba yocingo ibhasikithi ikhuphe idrowa yeekhabhathi zasekhitshini. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 332
I-341 Series yentsimbi eshenxisa ucingo isineki sedrawer kunye nesakhelo sekhitshi lekhitshi
Intshayelelo: I-341 Series yentsimbi eshibhile yocingo yokuhambisa isineki sedrowa ngesakhelo sekhabhathi zasekhitshini. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 341
I-351 Series yecala lokucoca intambo yocingo kunye ne-18 "iisilayidi ezithambileyo ezifihliweyo
Intshayelelo: I-351 Series yecala lokucoca intambo yocingo kunye ne-18 "iisilayidi ezithambileyo ezifihliweyo. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 351
I-401 Series 2 yomaleko wegridi yohlobo lwechrome ikhuphe idrowa yebhasikiti yocingo kunye nesikhokelo esisezantsi sedrowa
Intshayelelo: I-401 Series 2 yomaleko wegridi yohlobo lwechrome ikhuphe idrowa yebhasikiti yocingo kunye nesikhokelo esisezantsi sedrowa. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 401
I-402 Series gridwall ikhuphe isinyibilikisi esinyibilikisayo
Intshayelelo: I-402 Series gridwall ikhuphe isinyibilikisi esinyibilikisayo. Zilula ukufaka kunye nobuhlobo be-DIY. Ndwendwela iwebhusayithi yethu ukuze ukhethe ukuba loluphi uthotho onokulufuna Imveliso yethu ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Nayiphi na imibuzo nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo Inombolo: 402